Kaasa bocquu argii
Kaasa raawwachuuf hammataa bocquu isa hundarra xiqqaa galchi.
Argii galmee ammee bakkadeebisuuf yookiin haaromsuuf Shift+Ctrl+R tuqi.
Jabajjii guulinsaa fayyadami
Amaloota jabajjii VGA argama argii fooyyessuuf kallattiin argata. Gargaarsi guulinsa jabajjii sirna dalagaalee fi tamsa'ina hujeffannoo LibreOffice hundaaf hin jiru.
Yoo gargaarame, kaasa saxaatoo kakaasuu ykn dhiisuu dandeeessa. Yoo kaasan kaka'ee, saxaatoon wantootaa baay'ee siimeessa fi namtolchee xiqqoo fakkaatu.